Dowa WhatsApp APK ho an'ny Android Download [2022 Update]
March 29, 2022 Janoary 16, 2022 by Ali Quli
Salama daholo! Androany izahay nitondra fampiharana anao antsoina hoe Dowa WhatsApp Apk. Ity dia kinova WhatsApp Messenger novaina. Ankehitriny, amin'ny kinova ofisialin'ny fampiharana dia voafetra ianao hanao na hiampita fetra sasany. Ka ara-dalàna tokoa izany amin'izao fotoana izao izay mitady vahaolana hafa izay tsy misy fetra na fetra azo atao ka afaka manao zavatra tianao.
Misy faritra maro izay mamepetra anao ny fampiharana ofisialy aorian'ny handalovanao ny fetra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny mod mod dia azonao atao ny mamakivaky ny fetra rehetra. Talohan'ny mod, ny olona dia tsy afaka nanampy mpandray anjara maherin'ny 250 na mihoatra ny vondrona misy azy ireo. Ankehitriny amin'ny fampiasana an'ity kinova maoderina ity dia azonao ampiana mpandray anjara marobe tadiavinao ao amin'ny vondrona misy anao ary misy zavatra maro azonao atao amin'ny alàlan'ity mod ity.
WhatsApp lasa fampiharana tsy maintsy ampiasaina amin'ny finday satria tsara dia tsara ny endri-javatra atolony. Amin'ity mod ity dia ho azonao ny endri-javatra teo aloha rehetra ary koa ny vaovao. Olona maro no tia ny fampiharana ofisialy ary tsy te hifindra amin'ny mods izy ireo. Raha mampiasa an'io mod io ianao dia tsy hahatsapa hafa fa misy endri-javatra vaovao fanampiny.
Ankehitriny dia tsy mila manapaka ny horonan-tsary ianao amin'ny fampidirana azy ireo amin'ny tantaranao, azonao atao ny manampy tantara raha mbola tianao. Izy io koa dia manome anao lohahevitra vaovao ho an'ny fiavianao amin'ny chat ary koa ho an'ny famolavolana ankapobeny ny Mod App. Raha tianao ny lohahevitra default amin'ny fampiharana ofisialy dia manana azy ireo koa ianao. Araka ny voalazanay teo aloha dia afaka manampy mpandray anjara amin'ny vondrona misy anao tsy misy fameperana.
Betsaka ny olona no mieritreritra fa mila fandoavam-bola fanampiny ity mod ity ary mety handoa ny serivisy fa maimaim-poana ny zava-drehetra amin'ity app ity. Tsy mila mandoa na inona na inona ianao. Ataovy ao an-tsaina fa tsy maintsy esorinao ny fampiharana tany am-boalohany rehefa avy misintona ny Apk. Ny fomba fisoratana anarana dia mitovy amin'ny tena izy. Raha tsy fantatrao izay holazainay aminao dia tsy maintsy ampidiro ny laharan-telefaonanao ary hahazo OPT hanamarina ny laharanao ianao.
Misy mods maro hafa azo alaina ho an'ny WhatsApp saingy nitondra ny tsara indrindra ho anao izahay satria amin'ny fampiasana an'io dia afaka manampy fiarovana bebe kokoa amin'ny chat manokana ianao. Ity no tsara indrindra ho an'ireo izay tsy maintsy mitazona ny asany ho tsiambaratelo.
Endri-javatra lehibe Dowa WhatsApp Apk
Misy ny temotra sy sticker hafa.
Tsy misy fiampangana fanampiny.
anarana Dowa WhatsApp
Ilaina ny Android 4.4 sy ambony
Ity no Modified Version an'ny fampiharana ofisialy ary tsy misy rohy miaraka aminy. Ity dia fampiharana tsy ara-dalàna fa azonao atao ny misintona azy maimaim-poana sy soa aman-tsara avy amin'ny tranokalanay.
Tsy izahay no mpamorona ofisialy amin'ity fampiharana ity ary ny hany azonay ambara dia ny fampiasanao maimaimpoana ity app ity. Tsy misy ferana amin'ny resaka firenena ary azonao ampiasaina izany raha mbola misy izany. Izahay dia tsy manome anao antoka momba ny App, mila mampiasa izany ianao raha mety hampidi-doza anao izany.
Ahoana ny fampidinana Dowa WhatsApp Apk?
Izy io dia fampiharana an'ny antoko fahatelo ary tsy misy ao amin'ny Google Apps Store fa azonao atao ny misintona mora foana ny Apk avy amin'ireo rohy manome eo an-tampon'ny sy eo ambanin'ny pejy. Ny fisintomanao dia hanomboka amin'ny paompy iray amin'ny bokotra fampidinana ary mila miandry segondra vitsivitsy ianao aorian'ny nipaipaika indray mandeha.
Ahoana ny fametrahana Dowa WhatsApp Apk?
Nilaza izahay teo aloha ary nilaza indray fa aza adino ny manaisotra ny fampiharana ofisialy alohan'ny hametrahana ny app Dowa WhatsApp. Araho ireto dingana ireto aorian'izay:
Mandehana any amin'ny fametrahana ny telefaoninao> Fikirakirana fiarovana ary tadiavo ny safidy tsy fantatra loharano.
Ovay mba hamela ny fametrahana avy amin'ny loharano tsy fantatra.
Ankehitriny, tadiavo ilay Apk alaina avy amin'ny mpitantana rakitra.
Tsindrio ny Apk.
Andraso mandra-pahatapitry ny fametrahana ary kitiho ny bokotra Vita.
Ho vonona hampiasa ny fampiharana anao izao.
Raha mila tombony fanampiny ao amin'ny WhatsApp Messenger ianao dia ampidino avy aminay ity Apk ity Website.
Sokajy Apps, Fifandraisana Tags Dowa WhatsApp, Dowa WhatsApp Apk, Dowa WhatsApp App, Mod App Post Fikarohana
Don Maton Apk Download Ho an'ny Android 
NETBLU APK ho an'ny Android Download [2022 v1.3.0]
Hevitra 2 momba ny "Dowa WhatsApp APK For Android Download [2022 Update]"
Novambra 13, 2020 amin'ny 12: 20 pm
May 21, 2021 amin'ny 6: 02 pm
Hiii rohy bhajo